खाना पकाउन ग्यांस सिलिन्डर प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी ७ कुरा ध्यान दिनुस् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
खाना पकाउन ग्यांस सिलिन्डर प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी ७ कुरा ध्यान दिनुस्
२७ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार १०:२५
हामी सबैको घरमा दैनिक खाना पकाउन ग्यासको प्रयोग भइरहेको हुन्छ । ग्याँस सिलिन्डर राम्रो चेक जाँच नगर्नाले कहिलेकाँही ग्यास चुहिने, सिलिन्डर पड्किने खतरा रहन्छ । एलपिजी ग्यास कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे यि कुरामा ध्यान दिनुस् :
ग्यास सिलीन्डर प्रयोग गर्दा सधै नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कम्पनिबाट अनुमोदित ग्यास प्रयोग गर्नुहोस् । रेग्युलेटर किन्दा जहाँ पायो त्यहिबाट नलिनुस् । सहि चेक जाँच गरेर मात्र रेग्युलेटरको प्रयोग गर्नुस् । नयाँ सिलीन्डर प्रयोग गर्दा सिल जाच गर्नुस् । यदि तपाई ग्यांस प्रयोग कसरी गर्ने अनविज्ञ हुनुहुन्छ भने ज्ञान प्राप्त व्यक्तिको सहयोग लिनुस् ।
सिलिन्डर ग्यांस स्टोभ नजिकै राखिनुहुदैन । यस्तोमा ग्यांस लिक भए आगोलाग्ने सम्भावना बढि हुन्छ ।सिलिन्डर तातो वस्तुबाट टाढा राख्नुस् । यसरी सिलीन्डर पड्कने डर कम हुन्छ । यदि ग्यास चुहिरहेको छ भने तुरुन्त झ्याल ढोका खोल्नुस् । अगरबत्ती, मैनबत्ति, ग्यासको रेगुलेटर समेत बन्द गर्नुस् । साथै कोठामा ग्यांस लिक भए बत्तीको स्वीच नचलाउनुस्, स्वीच अन-अफ हुँदा उत्पन्न हुने झिल्काले ग्यांस सल्कन सक्छ।
ग्यास चुहिएको जांच गर्न कहिल्यै पनि सलाइको प्रयोग नगर्नुस् । सुरक्षित जाचको लागी हातको औला सिलीन्डरको मुखमा लगाउनुस् । यसले ग्यास लिक भए नभएको थाहा पाउन सकिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित : २७ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार १०:२५